Su'aalaha la isweydiiyo - Jiangsu Senwei Electronics Co., Ltd.
Ma waxaad tahay soo saaraha tooska ah iyo dhoofinta Shiinaha?
Haa, waan nahay. Waxaan nahay soo saaraha OEM & ODM ee maxalliga ah, waxaan leennahay warshaddeena gaarka ah iyo Waaxda Ganacsiga Caalamiga ah.
Warshaddeenu waxay ku taalaa magaalada Yixing, ee Gobolka Jiangsu, Shiinaha. Waxay qaadataa ku dhawaad ​​2hours tareen xawaare ka socda garoonka diyaaradaha ee Shanghai illaa magaaladeena. Si diiran ayaa lagugu soo dhaweynayaa inaad soo booqato warshaddeenna wakhti kasta.
Sideen u iibsadaa alaabtaada?
Fadlan noo soo dir su'aalahaaga (faahfaahinta, sawirrada, arjiga) adoo u maraya Alibaba, E-mayl, Wechat noo soo dir. Sidoo kale waxaad na si toos ah nooga soo wici kartaa baahiyahaaga, waxaan kuu soo jawaabeynaa ASAP.
Muddo intee le'eg ayaa hoggaaminta la hayaa?
Waxay qaadataa 25-30 maalmood kadib markii muunadda la xaqiijiyay iyo deebaajiga la helay. Haddii aad alaabta si deg deg ah ugu baahan tahay, fadlan noo sheeg, oo waxaan isku dayi doonnaa intii karaankeena ah inaan mudnaanta kuu siino.
Sidee baan tusaale kaaga heli karaa?
Haddii aan haysanno saamiyada moodellada aad u baahan tahay, waxaan si toos ah kuugu soo diri karnaa muunadda. Laakiin hadaad ubaahantahay DIIWAAN GELIN, qarashka saambalka ayaa lagaa qaadi doonaa. Labada dariiqoba, xamuulku wuxuu u baahan yahay inuu kugu dallaco adiga. Muunadaha waxaa laga soo diri karaa Fedex, UPS, TNT, DHL, ect.
Sideen ku siin karaa?
Alaab soosaarka baaxadda leh, waxaad u baahan tahay inaad bixiso 30% deebaaji kahor soosaarka iyo 70% dheelitirka markabka. Habka caadiga ah waa T / T horay. Isu dheellitirka dhinaca L / C, DP hortiisa waa la aqbali doonaa.
Ma hubin karaa tayada badeecooyinka ka hor bixinta?
Haa, ama adiga ama asxaabtaada shirkadda, ama dhinac saddexaad ayaa lagu soo dhaweynayaa warshadeenna si ay u kormeeraan kahor bixinta kahor.
Sidee badeecada la ii gaarsiinayaa?
Tiro yar, waxaan kugula talineynaa inaad soo dirto ergo, sida Fedex, UPS, DHL, ect.
Markab weyn, waxaan kugula talineynaa inaad markab ku raacdo badda. Waxaan u diri karnaa alaabooyinka loo xilsaaray Shixnadaha Soo-dejinta (qiimaha FOB). Ama haddii aadan haysan, waxaan kuu soo qaadan karnaa qiimaha CIF.